Items 1 to 16 of 1144 total
<p>“ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းတွေမှာ အသက်သွေးကြောသဖွယ် HDPE pipe”</p><p><br></p><p>HDPE pipe ဆိုတာ ?&nbsp;</p><p>သိပ်သည်းဆမြင့်ပြီး ရေရှည်အကြမ်းခံတဲ့ Polyethylene ပိုက်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။</p><p><br></p><p>ဘယ်မှာ သုံးလဲ ?&nbsp;</p><p>Electrical wiring ၊ Air-conနဲ့ Telecom လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ Conduit အဖြစ်လည်းကောင်း၊</p><p>ရေဆိုး၊ ရေသန့် အပါအဝင် အခြားအရည်များ သွယ်ဆက်ပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း အသုံးပြုပါတယ်။</p><p><br></p><p>အားသာချက် တွေက ?&nbsp;</p><p>သံချေးမတက်၊ Chemical ခံနိုင်ရည်ရှိ၊ ပျော့ပြောင်းကွေ့ကောက်နိုင်ပြီး ခံနိုင်ရည်အလွန်ရှိပါတယ်။</p><p><br></p><p>အရည်အသွေး စိတ်ချရတဲ့ Brand က ?</p><p>ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆယ်စုနှစ် ၃ခုကြာ ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသော THAI-ASIA P.E PIPE brand ဖြစ်ပါတယ်။</p><p><br></p><p>လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အမျိုးအစားအလိုက် Pipe model မျိုးစုံကို မှာယူချင်တယ်ဆိုရင် PK Myanmar Trading သို့ ယခုပဲ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။</p><div><br></div>
ဟွာထိုက်ကုမ္မဏီမှ ၀န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့မှာယူသော စက်ပစ္စည်းများကို မန္တလေးမြို့အတွင်းအိမ်အရောက်၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာအရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ အခြားနယ်မြို့များသို့လည်း၊ ကားဂိတ်အရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင်စက်ပစ္စည်းများ၊ ပြုပြင်လိုပါကလည်း မန္တလေးမြို့တွင်းဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလို လိုက်လံပြုပြင်ပေးပါသည်။ အခြားနယ်မြို့များမှ ပြုပြင်လိုပါက ၀န်ဆောင်ခအနည်းငယ်ဖြင့် လာရောက်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ဟွာထိုက်ကုမ္မဏီမှ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေအောင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
Stainless Steel construction designed for years of trouble free operation.Close coupled to NEMA standard submersible motor.Designed for flow rates up to 14 m3/h &amp; head up to 300 meters.
Reverse Osmosis System RO 100 GPD
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found inaretail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller&#039;s listing for full details.
SATAKE Destoner SGA5A-T
The Destoner separates stones and heavy impurities from rice according to differences in density. Heavy duty construction with thicker steel plates and sturdy frames ensures long life. -Stone Discharge and Re-sort Mechanism -Very low Maintenance -Compact Design
Best Star Water Tank 90GL,80GL,70GL
PVC ရေတိုင်ကီများကို အသုံးပြုလိုသော Customer များအတွက် အရေအသွေးကောင်းမွန်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ရေတိုင်ကီများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ပြီ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဖြင့် 1. BEST STAR WATER TANK များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်CUSTOMER များကိုရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ အိမ် စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံ / အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 2. နယ် CUSTOMER များအတွက် ကားဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 3.CUSTOMER များစိတ်တိုင်းကျအသုံးပြုလိုသော ရေ၀င်၊ရေထွက်၊ရေလျှံ ပေါက်များကိုစနစ်တကျဖောက် လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 4.ဖောက်ပြီးသောရေ၀င် ၊ရေထွက်၊ရေလျှံပေါက်များ၌ ခိုင်မာသော(SOCKET)များတပ်ဆင်ပေးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများရယူလိုက်ပါ။
23000000 ~ 25000000 $
NAVARA ရဲ့ အားသာချက်၊ ထူးခြားချက်တွေကတော့ဗျာ ... 190PS/450 NM အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားတွေနဲ့ ဆွဲငင်အားမဲ့ ထိုင်ခုံရယ်၊ ဇုံ(၂)ခု ပါဝင်တဲ့ လေအေးပေးစနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားတော့ ခရီးသွားရင် မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ လမ်းချော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့ စွမ်းရည်မြင့် ဘရိတ်စနစ် တွေအပြင် အနောက်ဘက် အရှိန်ညှိဂီယာ၊ ကုန်းအဆင်း အရှိန်ထိန်းညှိပေးသလို ကုန်းတက်မှာလည်းအကူအညီပေးလို့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စိတ်ချရတာပေါ့ဗျာ။ ဘီး၊ တာယာတွေအတွက် ကုတ်အား ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တွေ ၊ မော်တော်ယာဉ်ရွေ့လျားအားကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့စနစ် တွေအပြင် နေ့ခင်းဘက်မှာတောင် သင့်ကားကို မြင်သာစေတဲ့ မီးလုံးတွေပါရှိပါတယ် ခင်ဗျ။
<p>အားလုံးသိပြီးသား KNACK ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ရေဆင်းပေါက်(Drain) တွေPK Myanmar မှာရနေပြီလေ
အော်တိုပေါင်မုန့်ကြိတ်စက်သည် အလိုအလျှောက်စက်ပိတ်တဲ့အချိန် (0-60 စက္ကန့်) သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆက်တိုက်နှိပ်ရန်- နှိပ်ကြိမ် 1-99 ကြိမ်မှသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဟွာထိုက်ကုမ္မဏီမှ ၀န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့မှာယူသော စက်ပစ္စည်းများကို မန္တလေးမြို့အတွင်းအိမ်အရောက်၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာအရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ အခြားနယ်မြို့များသို့လည်း၊ ကားဂိတ်အရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင်စက်ပစ္စည်းများ၊ ပြုပြင်လိုပါကလည်း မန္တလေးမြို့တွင်းဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလို လိုက်လံပြုပြင်ပေးပါသည်။ အခြားနယ်မြို့များမှ ပြုပြင်လိုပါက ၀န်ဆောင်ခအနည်းငယ်ဖြင့် လာရောက်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ဟွာထိုက်ကုမ္မဏီမှ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေအောင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
EXCAVATOR BUCKETS SUMITOMO SH130
1. one 20GP can load about 12-14 pieces 1.0m3 or 1.2m3 buckets for 20ton excavator(Width less than 42 inches ) 2. one 40HC can load about 26-28 pieces 1.0m3 or 1.2m3 buckets for 20ton excavator; 3. one 20GP can load about 8 pieces 1.6m3 buckets for 30ton excavator; 4. one 40HC can load about 16 pieces 1.6m3 buckets for 30ton excavator. Excavator Buckets feature AR400 steel cutting edges and side cutters. Thick horizontal wear straps, full-curve side wear straps, and lifting D-rings are standard. Buckets are available in heavy-duty and severe-duty configurations for machines from 40,000 to 60,000 pounds. Optional bolt-on side cutters and extra pins are also available.
BEST STAR 60GL,90GL,120GL (ရေကန်)
ဘုန်းကြီးကျောင်းသုံး၊ အိမ်သုံး၊ ရေချိုးကန်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ရေကန်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော PVC ရေကန်များဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးမှာ အသုံးပြုသူများစိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တ်လုပ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် 1. BEST STAR WATER TANK များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်CUSTOMER များကိုရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ အိမ် စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံ / အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 2. နယ် CUSTOMER များအတွက် ကားဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 3.CUSTOMER များစိတ်တိုင်းကျအသုံးပြုလိုသော ရေ၀င်၊ရေထွက်၊ရေလျှံ ပေါက်များကိုစနစ်တကျဖောက် လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 4.ဖောက်ပြီးသောရေ၀င် ၊ရေထွက်၊ရေလျှံပေါက်များ၌ ခိုင်မာသော(SOCKET)များတပ်ဆင်ပေးပါသည်။
The track roller, which is also called bottom roller or lower roller, is one part of undercarriage parts for crawler heavy equipments such as excavator, bulldozer, crane, drilling machine etc. Excavator track roller is made of roller body, shaft, collars, Bi-metallic Bearings and seal group. It is made by forging, machining, heat treatment, assembly, painting etc. The quality and working life depends on the quality of raw steels, the hardness of rail surface, the depth of hardness layer, the quality of seal group etc. We control all procedure very strictly. We guarantee one year for our BERCH brand track rollers. Our track rollers are applicable for Komatsu, Hitachi, Kobelco, Daewoo, Hyundai, Volvo, Jcb etc. We can also offer OEM service according to your drawings or samples.